Voadika ny 04 Avrily 2012 5:52 GMT
Hetsika fanentanana manerantany ny Earth Hour izay karakarain'ny World Wide Fund for Nature (WWF) ary isaky ny Asabotsy faran'ny volana Martsa isan-taona no fankalazana izany. Tamin'ity andro ity, niangaviana ireo tokantrano sy orinasa mba hamono ireo jiro izay tsy ilaina mandritra ny adiny iray mba hanaovana fanairana momba ny fiovaovan'ny toetr'andro. Tanàna sy tanàn-dehibe maherin'ny 5200 manerana ny firenena 135 no namono ny jirony ho amin'ny Ora Irain'ny Tany 2011 ary tamin'ity taona ity, tanàna maro tahaka an'i Dhaka, Bangladesh no nandray anjara ihany koa.
Ora Irain'ny Tany tao Dimapur, Firenena Avaratra-Atsinanana ao Inde. Nampiato ny famatsiana herinaratra ny Sampandraharaha momba ny angovo ao Nagaland ho fankalazana ny Ora iray ny Tany. Sary avy amin'i Sorei Mahong. Copyright Demotix (27/3/2010))
@cinderellaman23 (SumanK Rajbhandari ): #Nepal no mpanohana lehibe indrindra ny Iray Oran'ny tany noho ny delestazy 🙂
@nazushrestha (Sujan Shrestha): Raha tsy tratran'ny delestazy ianao androany alina, vonoy ny jironao mandritra ny adiny iray manomboka amin'ny 8:30hariva-9:30hariva ho fanohanana ny Ora Irain'ny Tany. #Nepal @tfcNepal #fb
Olona mankalaza ny fandaharan'asa mikasika ny 60+Earth Hour ao Kathmandu, Nepal. Sary avy amin'i Sunil Sharma. Demotix (26/3/2011))